IAmazon ikhangela abasasazi eSpain nge-14 euros ngeyure, ubeke ezinye | Iindaba zeGajethi
Mva nje imarike yezabasebenzi eSpain inika okuninzi ukuba uthethe ngako, ngamanye amaxesha kulungile kwaye ngamanye amaxesha kubi. Inqaku kukuba iAmazon Spain ayiyeki ukukhula, Dala imisebenzi kwaye wenze ezinye iindlela zokusebenzisana, namhlanje siza kuthetha nawe malunga nezinto ezintsha ezikhoyo kwinkampani kaJeff Bezos.
Kwaye iAmazon ibonakala ingafuniswanga ngokupheleleyo yinkonzo ehanjiswa ziinkampani zothutho eSpain, kangangokuba ukuhlanganiswa koku ngakumbi kwezi mpawu kwinkampani kuyakhuthazwa. Umsebenzi osandula ukwenziwa ovela eAmazon uyinto ekhethekileyo, uya kukuhlawula ngexabiso le- € 14 ngeyure ukuba usasaza iiphakheji zayo ... iqhinga okanye unyango?
Kulungile kanye yile nto sifuna ukuyihlalutya namhlanje, esi sipho sibonakala sinomtsalane, kodwa ikwaneshicilelo sayo esincinci. IAmazon iya kukuhlawula kakuhle ngeyure nganye ohambisa ngayo iipakethi kwizixeko ezinjengeMadrid neValenciaNangona kunjalo, kuya kufuneka ujongane neentlawulo ezihambelana nomrhumo wokuzimela, isithuthi kunye nomnxeba. Le nkqubo yokuhanjiswa ibizwa ngokuba "yiAmazon Flex" sele ikhona kwamanye amazwe kwaye ayikude kule inikezwa ngabanye njengeDeliveroo okanye iGlovo. Kwaye ulumke, kuba iSpain lilizwe elithile eliqinisekisayo ngokomthetho wezabasebenzi, asithandabuzi ukuba isindululo esitsha seAmazon siza kuzisa umsila.
Iintlawulo ziya kwenziwa kwiibhloko zeeyure ezimbini ngexabiso le- € 28 kwibloko nganye. Ewe kunjalo, kuya kufuneka ujongane nazo zonke iindleko ezivela ekwenzeni umsebenzi, eSpain ayizukumbalwa, Kwiimeko ezininzi ukuxinaniselwa sisabelo esizimeleyo, emva koko kufuneka sikhumbule ulondolozo kunye nokusetyenziswa kwesithuthi esikhethileyo. Kwaye inyani kukuba amaxesha amancinci okuhambisa iAmazon aphatha ngokubanzi arhaxwa nkqu eyona ngcali, uninzi lwabantu abasihambisayo iimeko azifanelekanga. Ngenxa yoko, ukuya kwicandelo elizimeleyo kunokunyusa umgangatho wenkonzo ngaphandle kokuchaphazela iindleko. Okwangoku, ukuba uziqeshile okanye unexesha lasimahla, ungalijonga, nangona kwiimeko ezininzi kuya kufuneka unikezele ngeeyure ezi-6 ubuncinci ukuhlawula iindleko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » IAmazon ikhangela abasasazi eSpain nge-14 euros ngeyure, ubeke ezinye
I-Honor iveza iNew V10 entsha nge-6GB ye-RAM, iprosesa yaseKirin 970 ene-8 cores kunye nomzimba wesinyithi